2013 August : Oromo Democratic Front
Xiinxala Haala Empayera Itophiyaa
Posted by ODF on August 31, 2013 · Leave a Comment
Maqaan sirnaa kan biyyi Itophiyaa jedhamtee addunyaa biratti beekamtu kan duraanii Empayera Itophiyaa ture. Kana jechuun warri biyyicha uumee bulchaa tureyyuu, biyyi isaanii empayera ta’uu ni amanu turan. Empayera qabaachuun biyyooti Awropaa wajjin walqixa waan isaan taasisuuf ittiinis boonu turan. Dhuma Lola Addunyaa Lammaffaa (1945) booda garuu empayerri balfamaa dhufe. Haalli kun dhalachuun warri Awropaayyuu walabummaa biyyoota duraan koloneeffataa turanii akka fudhatan dirqe. Keessattuu Afrikaa keessatti walabumma gonfachuu kolonii warra Awropa baroota 1960ta keessatti daddaffiidhaan dhugoomaa ture. Kun deeme Empayera Itophiyaas yaaddessuu jalqabe. Ollaa empayerichaa keessaa kan dura walabummaa gonfate Sudan ture. Kunis bara 1956tti dhugoome. Itti aansee, Somalian bara…
Posted by ODF on August 30, 2013 · Leave a Comment
Addi Dimokiraatawaa Oromoo (ADO)n bu’ureeffama isaa ilaalchisee menfesto baase keessatti Ethiopian erga akka biyyaatti moggaatee ka’ee takkaallee seera mootummaa, kan ummanni irratti mar’atee ittiin buluuf raggaasifte akka hin qabnee fi hanga har’aatti hegge-mengist qofaa akka qabdu ibse. Ittti fufuunis hegge- mengistiin kun ammoo meeshaa cunqursaa warra biyya sana walduraa duubaa bulchaa turanii fi jiranii ta’ee akka tajaajilu ibsuun, ADOn waan irratti qabsa’uuf lafa kaawwate keessaa tokko hegge-mengistii sana gara heeraatti jijjiiruun biyya Ethiopia keessatti olaantummaan seeraa akka jiraatu taasisuu ta’uu isaa ibsee ture. Dhaggeefattooni keenya kan Afaan Oromoo, Afaan Ingilizii fi Amaaraa beekan, maal Heera (Constitution) fi Higga Mangistiin tokkoo…
Gabaasa Oduu Walgahii Hawaasaa DC fi Ohio
Posted by ODF on August 23, 2013 · Leave a Comment
Gabaasa Oduu Walgahii Hawaasaa ADO yaamamee Washington DC fi Columbus Ohio t gaggeeffame Dhiheenya kana Hagayya 10 fi 11 bara 2013 Marsaaleen ADO Columbus Ohio fi Washington DC jiran walgahii ummataa naannoo jiranitti qopheessuun hawwaasni Oromoo nannoo sana jiraatan akka irratti argamanii hoggantoota ADO waliin mari’ataniif carraa bananii turan. Walgahiin gaggeeffamanlamaan kunis akeeka yaamamaniif guutuun milkiin xumuraman. Walgahii Columbus Ohio ti gaggeeffame irratti ummatni Oromoo naannoo Culumbus Ohio fi New York irraa walitti dhufe baayyinaan kan irratti argame yoo ta’u walgahichis akka aadaa Oromootti eebbaan kan baname ture. Eebba Maanguddoon boodas Hoggantoota ADO keessaa Obbo Leencoo Lataa Pirezdantiin ADO, mataa…
Xinaxala Haala Siyaasa Adunyaa
Posted by ODF on August 21, 2013 · Leave a Comment
Xinaxala Haala Siyaasa Adunyaa – Barruu barnoota hubannaaf dhihaate Barruu gabaabaan kun haala addunyaa kan yeroo ammaa irratti hubannaa fi yaada walfakkaatu uummatnis ta’e qabsaa’otni oromoo akka qabaatan gargaara yaada jedhu irraa akka ta’e dursinee isin hubachiisuu feena. kunis hubannaa walfakkaatu qabaachuun ilaalcha walfakkaatu akka qabaannuuf murteessaa dha. Ilaalcha walfakkaatuu qabachuun ammoo nu ijaara. Qaama tokkicha, qalbii tokkicha, sammuu tokkicha akka qabaannu nu taasisa. Akeekni barruu kanaa haala akkasii aanjessuu irratti xiyyeeffata. Haalli kamiyyuu yeroo irraa gara yerootti ni jijjiirama. Waan ta’eef, xiinxalli haala addunyaas yeroo irraa gara yerootti haarayoomuu qaba. Xiinxallis sadarkaa adda addaatti godhama. Gariin irra keessa qofa…
Xiinxala Haala Gaanfa Afrikaa – Haala siyaasa Gaanfa Afirkaa hubachuuf akka ta’utti barruu qophaawe. Godinaan Gaanfa Afrikaa jedhamee beekamu Sudan, Sudan Kibbaa, Eritrea, Djibouti, Somaliland, Somalia hafee fi Itophiyaa hammata. Boodana keessa Kenya fi Ugandas itti dabaluun ni jira. Garuu xiinxala keenya kanaaf jara boodanaa lamaan dabaluun faayidaa waan hin qabneef Gaanfa Afrika akka duraan beekamutti fudhanna. Godinaan kun Gaanfa warseessaa waan fakkaatuuf Gaanfa Afrikaa jedhamee mogGaanfame. Godinaa kana haallan walitti hidhan danduu dha. Keessattuu haalli politikaa biyyoota kanneen keessaa tokko keessatti dhalatu warra hafanis ni tuttuqa. Caalaatti ammoo wanti biyyoota ollaa isee keessatti dhalatu Itophiyaa ni tuttuqa. Sababni isaas…
Happy Eid Al-Fitr from ODF
Posted by ODF on August 9, 2013 · Leave a Comment
We, members of the Oromo Democratic Front, wish our Muslim brothers and sisters in Ethiopia and throughout the world a very happy Eid Al-Fitr. We congratulate each and every one of them for successfully completing a month-long period of fasting, religious devotion and fellowship. During the month of Ramadan, Muslims dedicate themselves to deep religious reflection, fasting and prayer in order to enhance the fellowship of family and community members. Such an exercise is best performed under conditions of peace and harmony, conditions that have been non-existent for Ethiopian Muslims now for almost two years. Hence, Muslims are celebrating this…
Empaayeraa Dimokraatessuu Ilaalchisee ergaa gulaalaa Imaammata ADO
Posted by ODF on August 8, 2013 · Leave a Comment
Addi Demokratawaa Oromoo, ADO, ummanni Oromoo biyya isaa irratti abbaa, qabeenya isaa irratti abboomaa, jireennya isaa irratti murteessaa ta’ee, sabaa fi saboota biyyattii hunda waliin sirna mootummaa Federaalaa dhugaa, kan dimokiraasii, haqaan bulmaatnii fi wal qixxummaan keessatti dagaagan uumuu akeekkatee socho’a. Kana fiixaan baasuufis Ethiopan dimokiratoftee fedireshenii sabdaneessaatti jijjiiramuun dirqii ta’uu isaatti amana. Yaadni kun yaada qajeelaa fi eebbifamaa ta’uu waakkachuu yeroo dadhaban akkaataa hujiitti hikamuu danda’amuu isaa irratti namoonni mamii kaasan ni jiru. Hundeen mamii kanaa tokko gaaffii empaayerri akkamitti dimokraatawa jedhuu irraa madda.
RBO – July 2013
Posted by ODF on August 7, 2013 · Leave a Comment
Here you will find Radio Bilisummaa Oromoo programing for the month of July.